လေးစားမှု့နှင့် အကြောက်တရား — Steemit
တစ်ချိန်တုံးက မြို့တစ်မြို့တစ်မှာ အရမ်းကြမ်းကုတ်ရက်စက်တဲ့ ဘုရားတစ်ပါးရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့၊ မြို့သူမြို့သားအားလုံးက ဘုရင်ရဲ့ အကြင်နှာကင်းမဲ့မှု့ကြောင်း၊ အရမ်းကို ကြောက်အားပိုပြီးနေရပါတယ်တဲ့၊
ဘုရင်ကြီးမှာ အရာရာ အကုန်လုံးထက်ချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့ ခွေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့၊ ကံမကောင်းစွာဖြင့် တစ်နေ့ မနက်ပိုင်အချိန်မှာ ဘုရင်ရဲ့ခွေးလေးက ဆုံးသွားပါတယ်၊ ဒါကြောင်း ဘုရင်က နောက်ဆုံးရို့ရာဓလေ့များဖြင့်၊ ပှုဇော်ပါတယ်။
အနီးနားကမြို့သူမြို့သားတွေက မီးသဂြိုဟ်ရန် ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်၊ ဘုရင်ကြီးက မီးသဂြိုဟ်ရန်လာကြတဲ့ လူတွေကို မြင်ပြီးတော့ ငါကိုအရမ်းလေးစားကြပါလားဆိုပြီး၊ ကမ္ဘာမှာ နာမည်အကြီးဆုံးဘုရင်တပါးဟု ထင်မှတ်နေခဲ့ပါတယ်တဲ့၊
နောက်သိပ်မကြာမှီ ဘုရင်ကြီးကွယ်လွန်ပါတယ်တဲ့၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်မှာ ဘုရင်ရဲ့ အသုဘ ကိုမရောက်လာကြဘူးတဲ့၊ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲ၊ လေးစားမှု့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုပါ၊ ကျွန်တော်တို့ကို လေးစားဖို့ တခြားသူတွေကို ကျွန်တော်တို့ အမီးပေးလို့မရဘူး၊ လေးစားမှု့နှင့် အကြောက်တရားနှစ်ခုကြားမှာ အနည်းငယ်ကွဲပြားမှု့ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါအပြင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေမှာ အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်၊။
#respect #and #fear #esteem
Congratulations @konyi! You have receivedapersonal award!
@konyi you were flagged byaworthless gang of trolls, so, I gave you an upvote to counteract it! Enjoy!!
Congratulations @konyi! You receivedapersonal award!